Kutheni kwaye uyicwangcisa njani iakhawunti yeGravatar | Martech Zone
Eyona nto iphambili ekwandiseni igunya kunye nokuphucula isikhundla seinjini yokukhangela kukufumana ukukhankanywa kwiindawo ezifanelekileyo malunga nendawo yakho, uphawu, imveliso, inkonzo okanye abantu. Abahlohli bezonxibelelwano noluntu bayazibeka ezi ncoko yonke imihla. Bayayiqonda into yokuba ukufumana abathengi babo ingqalelo kwi-intanethi eqhuba ukwazisa uphawu. Ngotshintsho lwealgorithm, ikwasicwangciso esiliqili sokuphucula eyakho Uluhlu lwamagama aphambili kwiinjini zokukhangela.
Ngamanye amaxesha, asinalo ithuba lokwenza udliwanondlebe okanye ukubhala malunga neemveliso kodwa isandi silungile kangangokuba simema ingcali ye-PR ukuba ibhalele post post. Eli nqaku lelona candelo lilula lokuzibandakanya, iinkampani zizimisele ngakumbi ukubonelela ngenqaku. Sibeka iimfuno ezithile kubo:
Zama ukugcina umxholo phakathi kwamagama angama-500 ukuya ku-1,000 XNUMX.
Chaza ingxaki abanayo abathengisi kwaye uzame ukubonelela ngeenkcukacha-manani ngezixhobo ezixhasa isiseko.
Bonelela ngeendlela ezilungileyo zokusombulula ingxaki.
Ukuba unesisombululo setekhnoloji, nikeza iinkcukacha ngendlela esinceda ngayo.
Faka ii-skrini, iidayagramu, iitshathi okanye-ngakumbi ividiyo yesisombululo.
Asifuni umhla wokugqibela, kodwa gcina ulwazi malunga nenkqubela phambili.
Bhalisa umbhali nge IGravatar kwaye usinike idilesi yemeyile yombhali ababeyisebenzisa ukubhalisa.
Umbhali uya kongezwa kwincwadana yethu kwaye unokuqhagamshelana naye ngqo ukuze alandele. Ukuba iposti iyathandwa, sinokwenza nepodcast ngesihloko.
Ukubhalisa umbhali nge-Gravatar kubalulekile ukuze bona unokulawula umfanekiso oboniswe kwiprofayili yombhali. Ngaphandle kwayo, besiya kucelwa rhoqo hlaziya iifoto zombhali kwaye asifuni kulawula loo nto. I-Gravatar yinkonzo elula kwaye inomdla kumbhali ukuba ayisebenzise ukuze babe nomfanekiso owaziwayo kuyo yonke iwebhu- hayi kwindawo yethu kuphela.
Ukusuka kwiwebhusayithi yeGravatar:
"I-avatar" ngumfanekiso omele i-intanethi-umfanekiso omncinci ovela ecaleni kwegama lakho xa unxibelelana neewebhusayithi. IGravatar yi I-Avatar eyaziwayo kwilizwe jikelele. Uyifaka kwaye wenze iprofayile yakho kube kanye, emva koko xa uthatha inxaxheba kuyo nayiphi na indawo enikwe amandla yiGravatar, umfanekiso wakho weGravatar uya kukulandela ngokuzenzekelayo apho. IGravatar yinkonzo yasimahla yabanini beendawo, abaphuhlisi kunye nabasebenzisi. Ifakwa ngokuzenzekelayo kuyo yonke iakhawunti yeWordPress.com kwaye iyaqhutywa kwaye ixhaswe ngu Automattic.
Kutheni sisebenzisa iGravatar?
Abantu bahlala betshintsha iifoto zabo zeprofayili kwiindawo zabo zemithombo yeendaba. Banokutshintsha izitayile zeenwele, okanye babe neefoto ezintsha, zobungcali ezithathiweyo. Ukuba ubhale inqaku ukuze upapashe, bayihlaziya njani ifoto yakho kweyona yokugqibela kunye neyona inkulu? Impendulo yile IGravatar.
Kwi-WordPress, ifoto yombhali ifunyenwe ngentambo ebhaliweyo ye-imeyile yombhali. Idilesi ye-imeyile yombhali ayiboniswanga esidlangalaleni. Kwaye iakhawunti yeGravatar iya kukuvumela ukuba ulawule iidilesi ezininzi ze-imeyile kwiakhawunti, kunye nemifanekiso emininzi.
tags: umbhaliiprofayili yombhaliavatargravatar
Izizathu ezi-5 Iqela lakho lokuThengisa alifikeleli kwiiQuotas zabo
Oktobha 17, 2007 ngo-10: 59 PM
Ukuba uyayibona le Gravatar naphina kwiwebhu, ndim!
Okt 18, 2007 ngexesha 4:20 AM
Andisebenzisi iGravatar kodwa endaweni yoko ndisebenzisa i-MyAvatar eyi-plugin yeWordPress.
Oku kuvumela into efanayo ukuba yenzeke kodwa kukuba i-avatar ebonisiweyo iya kufana naleyo ikwi-MyBlogLog.
Oku kunciphisa izinto ezininzi kuba uninzi lwabafundi aluyi kuthatha inyathelo elongezelelweyo lokufaka i-avatar yokuqhekeka. 🙂
Okt 18, 2007 ngexesha 11:35 AM
Ndiyayithanda i-gravatars kwaye ndiyavuya bayigcwalisile. Ngethemba, iyakubonakala ngathi idityanisiwe kuhlobo lwegama lokushicilela…
Kukho uphononongo olulungileyo lwee gravatars e http://www.thetechbrief.com/2007/10/12/get-yourself-a-gravatar-while-theyre-still-hot/
Okt 19, 2007 ngexesha 12:12 AM
Kwaye ngoku yinkonzo yasimahla ngokupheleleyo-yongeza ii-avatat ezininzi kunye ne-imeyile oyifunayo
Jan 8, 2008 ngo-10: 59 PM
Ndiyilele iklasi yeGravatar ukuba ucofa ikhonkco egameni lam. Idityaniswe ngokukhululekileyo kwaye isebenza njengephupha- ikwanayo ne-cache enomhla wokuphelelwa kwe-avatar-yokugcina kumaxesha okulayisha. Inokulayisha nje i-avatar ekuhlaleni.
UAdam @ I-TalkPHP.com